Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2018-Faah faahin ku saabsan qaraxyo iyo weerar toos ah oo ka dhacay Muqdisho
Ka hor rasaas xoogan oo laga maqlay xarunta wasaaradda waxaa jiray labo Qarax oo dhacay, mid ka mid ah Qaraxyada ayaa la sheegay in uu ahaa mid culus oo siweyn looga maqlay inta badan magaalada Muqdisho.
Xarunta la weeraray ayaa marka laga soo tago wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxaa ku shaqeysa wasaarrada Amniga, iyadoo warar soo baxaya sheegayaan in ay gudaha u galleen rag hubeysan oo laakiin aan la ogeyn tiradooda.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Qaraxyadan iyo weerarka intaba hasse ahaatee waxaa gaaray goobta gadiidka gurmadka deg deg ah oo halkaa ka qaaday tiro dad ah oo qaba wax yeello kala duwan.
Isgoyska Sayidka waxaa yaala Koontarool ay ku sugan yihiin ciidamada Ilaalada Madaxtooyada, waana koontaroolka ugu horeeya ee laga sugo amniga madaxtooyada.
Al-shabaab ayaa guud ahaa sheegtay qaraxyada iyo weerarka ka dhacay xarunta Wasaaradda arrimaha gudaha, hasse ahaatee ma aysan bixin faah faahin intaa dhaafsiisan.
7/7/2018 12:57 AM EST
Sabti, July, 07, 2018 (HOL)–Wararka ka imanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saaacadihii aynu ka soo gudbay halkaa laga maqlay madaafiic ay is weydaarsadeen ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ee isku hor fadhiya jiida hore ee dagaalka.